Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Fiaramanidina an-tsambo fahavaratra Bahamas ankehitriny miaraka amina fitaovana feno
Travel Travel • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Sary nandritra ny fizaran-tany Bahamas Summer Boating Fling ka hatrany Bimini farany teo dia, avy amin'ny ankavia sy havanana, Ahmad Williams, BMOTA; Mpilalao NFL, DJ Swearinger; Kapiteny Richard Treco, BMOTA ary Jonathan Lord, BMOTA.
Miomana tanteraka ny sidina fiambenana fahavaratra navoakan'ny minisiteran'ny fizahantany sy fiaramanidina Bahamas (BMOTA) mankany Bahamas. Isaky ny faran'ny herinandro manomboka ny 10 jona ka hatramin'ny 1 aogositra dia mandeha any an-dranomasina ny mpandeha an-tsambo sy ny za-draharaha, miampita ny renirano mankany Grand Bahama na Bimini hiaina traikefa nahafinaritra iray manontolo, manomboka amin'ny fandraisam-bahiny sy ny snorkeling hatrizay ka hatrany amin'ireo hetsika feno kolontsaina.
Ny mpilalao NFL malaza DJ Swearinger dia nandray anjara tamin'ny Fling to Bimini, niaraka tamin'ireo mpankafy sambo.
Ity dia fotoana mahaliana iray hijerena ireo nosy amin'ny fomba miavaka.
Ny ranomasina misokatra sy ny kapiteny efa za-draharaha mifangaro amin'ny masoandro, fasika, ary ranomasina Bahamianina dia manao ny dia farany amin'ny lalan-dranomasina.
Ny sambon-tsambo farany nankany Bimini, ny 24-27 jona, dia nahasarika ilay mpilalao NFL malaza Dayarlo Jamal "DJ" Swearinger Sr., izay nitaingina seranan-tsambo kely nankany Bimini. Ireo mpankafy ilay veteranista NFL sivy taona malaza ary alumnus an'ny University of South Carolina teo aloha dia nanatevin-daharana ny sambon'izy ireo tamin'ny dia an-tongotra 50-kilometatra mahafinaritra sy tsy hay hadinoina ary nahafinaritra.
Ny vondron'olona fito ambin'ny folo, ahitana mpandeha an-tsambo vaoavao sy taloha, avy any South Carolina, Florida ary Georgia, dia nanao tabilao ho an'ny renirano mankany Bimini avy any Bahia Mar Marina any Fort Lauderdale, amin'ny sambo izay mitombo 24ft ka hatramin'ny 33ft. Notarihin'izy ireo ny maso ivoho sambo Bahamian, Kapiteny Robert Brousseau avy any South Carolina ary Isaac Burgos avy any Florida ary ny Kapiteny Richard Treco, mpitantana ambony teo amin'ny BMOTA ary ny mpikarakara ny fling, izay nitarika sambo dia mankany The Bahamas nandritra ny 40 taona mahery.
“Mampifanaraka ny sambo amin'ny hafainganam-pandeha mitovy izahay, mba hahafahan'izy ireo mifampijery. Omena azy ireo ny fandrindrana GPS ary asehonay azy ireo ny fomba hamakiana loza, mba hahafahan'izy ireo mivezivezy soa aman-tsara any amin'ny rano Bahamian, ”hoy i Treco.
Ny ranomasina misokatra, kapiteny efa za-draharaha sasany miaraka amin'ny olona vao liana te hahafantatra, sambo vitsivitsy, mazava ho azy, mifangaro amin'ny masoandro, fasika ary ranomasina Bahamianina ho an'ny dia an-dranomasina farany. Inona no mety hahasarika kokoa noho ity karazana fotoana ity hijerena ireo nosy amin'ny fomba miavaka toy izany?
Ny sekretera maharitra ao amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy fiaramanidina Bahamas, Andriamatoa Reginald Saunders (nipetraka teo aloha, ankavanana faharoa) dia teo am-pelatanan'ny kapiteny vao haingana tao amin'ny Bahia Mar Marina, hiresaka amin'ireo mpandeha sambo mandray anjara amin'ny sidina sambo mankany Bahamas.
Nijanona tao amin'ny Resorts World Bimini sy ny Bimini Big Game Club Resort & Marina ny vondrona, ary nandray anjara tamina hetsika maromaro tany Bimini sy ny manodidina. Anisan'izany ny fizahana ireo toerana manan-tantara ao amin'ilay nosy, miaraka amin'ny mponina mandritra ny ora falifaly ao amin'ny I-95 Broward Bar & Restaurant any Bimini, Mike's Conch Stand ary snorkeling ao amin'ny toerana fisitrihana lozam-pifamoivoizana malaza Bimini, ny SS Sapona Shipwreck ary Honeymoon Harbour, toerana tsy misy mponina nosy akaiky, feno stingrays, vatohara tsara tarehy, haran-dranomasina ary fiainana an-dranomasina isan-karazany. Ny sasany koa nanatrika kaonseritra, ahitana an'i DJ Flo Rida, ao amin'ny Resorts World Bimini.
Mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo sidina sisa tavela, fa ny toerana kosa dia natokana ho an'ny fahatongavana voalohany. Ny sidina voalahatra dia: 8 Jolay -18 (fling mitohy mankany Eleuthera) ary hatrany Bimini, 22 - 25 Jolay ary 29 Jolay - 1 Aogositra 2021. Raha mila tsipiriany misimisy momba ny saram-pisoratana anarana sy ny fampahalalana hafa dia tsidiho ny Bahamas.com/boating. Soso-kevitra ny hanatrehan'ny olona liana ny fivorian'ny kapiteny ao amin'ny Bahia Mar Marina ao Fort Lauderdale. Ny fivoriana dia atao amin'ny Alarobia alohan'ny hidiran'ny tsirairay ary hanomboka haingana amin'ny 6:30 hariva
Miaraka amin'ny nosy sy cay maherin'ny 700 ary nosy itodiana tsy manam-paharoa 16, i Bahamas dia 50 kilaometatra monja miala ny morontsirak'i Florida, izay manome sidina mora manidina izay mitondra ny mpandeha lavitra ny andavan'andro. Ny nosy Bahamas dia manana fanjonoana, antsitrika, sambo an-tsambo, fanaovana vorona ary fikajiana natiora, an'arivony kilaometatra amin'ny rano mahavariana indrindra eto an-tany sy ny morontsiraka madio miandry ny fianakaviana, mpivady ary mpivahiny. Jereo ny nosy rehetra atolotra ao https://www.bahamas.com/ na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.